Near Silent dakpuo Factory - China Silent dakpuo Manufacturers, Suppliers
Ngwaahịa X8 Silent Drill na-eji ọtụtụ ihe na-adọrọ ụda, obere mkpọtụ, dị mfe ịchọta. Obere, obere, ị nwere ike ịrụ ọrụ n'ime obere oghere n'ime ogige ahụ. Na Ikanam ìhè mgbanaka maka mfe egwu omimi gburugburu ebe obibi nnyocha na mmesho. Dị mfe, ọkụ ma na-agbanwe agbanwe, ịgba ọsọ, torque na njirimara ndị ọzọ. Ebumnuche ebumnuche na ngwa X8 Sillnt Drill bụ nke a na-ejikarị na ndị agha na ndị uwe ojii mgbochi mgbochi, nyocha nke iyi ọha egwu na ihe ndị ọzọ pụrụ iche ...
Silent malite ịgba na sọrọ moto
1.Ihe ngosi C8 dual motor drill bụ ihe eji eme mkpọtụ mkpọtụ dị ala. Mgbe ha na-arụ ọrụ ahụ, ndị ọrụ uwe ojii nwere ike ịkụpu oghere na mgbidi ahụ na mkpọpu ọkụ dị jụụ na-enweghị ndị omempụ na-enyocha ma jirizie ọrụ ndị ọkachamara ( Iji chọpụta ihe dị n'ụlọ ahụ, ọ kachasị site na mgbidi iji chọpụta ọrụ nke ndị ọrụ ụlọ ahụ. Ọ na-eme ka ndị uwe ojii nwee ike ịnweta onye iro ahụ ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi, eji ya n'ọtụtụ ...
Silent akuakuzinwo C7
Isi C7 nso nkịtị akuakuzinwo a na-akpọ ala mkpọtụ malite ịgba. t bụ maka mgbochi iyi ọha egwu, nnapụta njigide ma ọ bụ onyunyo onodu. Ihe ngbachi ahụ dị nso nwere ike igwu ala na mgbidi na-adọtaghị uche ndị omekome ma tinye nyocha anya agwọ iji lelee ọnọdụ ahụ. Ngwaọrụ dị na ebu ebu. Ọ dị mfe ịtọlite ​​ma rụọ ọrụ. A na-etinye usoro ihe ndozi niile na ihe a na-ebu nke ejiri ngwa ngwa ma rụọ ọrụ ngwa ngwa. E nwere 3 propulsion ụdịdị, gụnyere onwe-propelled usoro, ma ...